Ilhaan Cumar oo markale dib loo doortay - Radio Risaala: Somali News Online
Dowladda Soomaaliya oo meel kale u wareejisay Ciidamadii lagu qabtay dagaalkii Beled-Xaawo
Somaliland oo ka joojisay Arday wax uga baran jiray Gobolka Tigreega
Laamaha Ammaanka dowlad Goboleedka Koonfur galbed ayaa faah faahin ka bixiyay howlgal ciidan oo ka dhacay degaan ku yaal duleedka Magaalada Baydhabo ee Xarunta…
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay waddo qorshe lagu dhisaayo Ciidanka Badda
Home Wararka Ilhaan Cumar oo markale dib loo doortay
Ilhaan Cumar oo markale dib loo doortay
Ilhan Cumar ayaa saacado ka hor waxaa dib loogu soo doortay Koongareeska Mareykanka iyadoo ku soo baxday doorashadii ka dhacday degmada 5-aad halkaas oo ay ku difaacatay kursigeedii.
Codbixintii shalay deegaankaas ka dhacday ayey Ilhaan kaga guulaysatay musharixiintii kale ee kursigan kula tartamaysay.
Safaf dhaadheer ayey dadka ugu jireen sidii ay codkooda doorashadan uga dhiiban lahaayeen, iyadoo la sheegay in Soomaali badan ay sanadkan codkooda dhiibteen.
Dhanka kale waxaa weli socota tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee waddankaasi Mareykanka, iyadoo laga dhursugayo oo haatan ay diiradda saaran tahay gobollada aadka loogu loolamayo.
Waxaa jiro gobollo aana dhinacna raacsanayn oo haddii musharaxa Xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden uu doonayo inuu xilka kala wareego Madaxweyne Trump ay tahay inuu ku guulaysto.
Iyadoo ku dhawaad boqolkiiba 96 la tiriyay codadka doorashadii gobolka Florida, ayaa Mr Trump waxa uu u muuqanayaa inuu waxoogaa ka horreeyo ninka ay tartamayaan hasayeeshee weli dhinacna looma ridi karo arrintaasi.
Gobollada kale ee aadka loogu loolamayo waxaa ka mid ah North Carolina, Pennsylvania, Ohio iyo Michigan.
Previous articleDAAWO:-Wadooyinka ugu muhiimsam Muqdisho oo xiran
Next articleSomaliland oo xukun ku riday Milkiilaha Astaan TV
Laamaha Ammaanka dowlad Goboleedka Koonfur galbed ayaa faah faahin ka bixiyay howlgal ciidan oo ka dhacay degaan ku yaal duleedka Magaalada Baydhabo ee Xarunta...